Ukuhla kwamanzi ngeFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULaura Carro | | Photoshop, Ukuhlelwa, Amaqhinga
Namhlanje siza kubona indlela yokwenza isiphumo elinganisa amathontsi emvula nakowuphi na umphezulu onokucinga ngawo.
Amaconsi amanzi anokuba yinyani njengoko ayilwe kwimifanekiso yentengiso, okanye abanye. Namhlanje siza kuchaza indlela yokuyila, kunye nendlela yokwenza ukuba bajonge okwenyani kangangoko kunokwenzeka.
Kuqala senza i ukhetho kwimo yesetyhula.
Kuxhomekeke kwimbono esihlala kuyo ukhetho ukususa okungaphezulu kunye nokukhethwa kwamacala amaninzi. Kamva siyagcwalisa ukhetho kumaleko omtsha.
Kolu luhlu into ekufuneka uyenzile kukucofa kabini kwaye kwiwindows pop-up sikhetha ukhetho Wotho kunye Emboss.
Sishiya ikhusi kunye neempawu esizikhethileyo, ukuze ube nesikhokelo ekufuneka usilandele, ukuba uthe wadideka kubunzulu, ukuqaqamba okanye isithunzi ekufuneka usenzile.
Sele unayo i-Bevel kunye ne-Emboss ebunjiweyo, oku kulandelayo susa ukugcwaliswa kombala maleko, ushiya ucace gca kodwa ngesiphumo esibonakalayo, uya kubona phantsi kokhetho "opacity" olu khetho lunegama "Gcwalisa".
Nje ukuba sibone ukuhla kwamanzi kunye nokucaca kwawo, siya kubona ukuba kunokuba yimfuneko ukwenza uhlengahlengiso, kule meko sisebenzisa irabha kwaye sisusa i-bits yethontsi ide isiqinisekise. Abanye bakho baya kubona isidingo sokususa ngaphezulu, abanye bayishiye njengoko injalo. Oku kuxhomekeke kuhlobo lomfanekiso esiwusebenzisela imvelaphi, kunye imbono yakho.
Xa silungele ukuwisa, sinokubonakalisa. Kule nto sithatha ithontsi, siyiphinde kwaye songeze omnye umaleko ngaphezulu; olu luhlu lokugqibela luya kusinceda "Gcwalisa umfanekiso" kwaye isiphumo somaleko esiwuphindayo awusasebenzi, kodwa yinxalenye yomfanekiso. Oku kusebenza ukuze xa sijikeleza umfanekiso, iimpawu ebesizibeke ngaphambili kwithontsi azigcinwa. Ke nge CTRL + E, sibini ngokufanayo, ukuba nomaleko ophindwe kabini kunye nolwahlulo olutsha olukhethiweyo xa ucinezela loo miyalelo.
Okokugqibela kuphela siphinda kabini (ctrl + J) ukwehla kunye nokubonakaliswa kwayo kwaye siyancipha okanye siyandisa kwaye siyishenxisa, endaweni yoko, siya kuba namaconsi amaninzi kumfanekiso wonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ukuhla kwamanzi ngeFotohop